Akhriso: 6 astaamood oo lagu garan karo afgembiyada dhaca + Sawirro - Caasimada Online
Home Warar Akhriso: 6 astaamood oo lagu garan karo afgembiyada dhaca + Sawirro
Akhriso: 6 astaamood oo lagu garan karo afgembiyada dhaca + Sawirro
Muqdisho (Caasimada Online) – Militariga dalka Zimbabwe ayaa xabsi guri geliyay madaxweyne Robert Mugabe, waxayna la wareegeen telefishinka qaranka iyo awoodda dalka.
1-Qofna ma dhahayo waa afgembi
Safiirka Zimbabwe ee Koonfur Afrika u fadhiya, Isaac Moyo, wuxuu so cad u sheegay in afgembi uusan dhicin, iyo in dowladda ay weli “shaqeyneyso”, militarigana uusan la wareegin awoodda dalka.
“Keliya waxaan eeganeynaa burcadda ku hareereysan madaxweynaha, kuwaas oo sabab u ah dhibaatada dhaqaalaha iyo mid bulsho,” ayuu yiri taliyaha ciidamada Janaraal Moyo oo TV-ga toos uga hadlay shalay.
“Isla marka aan dhameyno howlgalkeena, waxaan fileynaa in xaaladda ay caadi ku soo noqoto”.
Balse “xaaladda” dhankooda waxay u muuqataa mid xun oo digniin leh, gaar ahaan kuwa ku jira dhanka militariga qaaday ficilka ay awoodda kula wareegeen.
“Kani ma ahan inqilaab, balse waa tallaabo ay u dhan yihiin shacabka iyo militariga, si loo soo celiyo kala dambeynta dastuureed”, ayuu yiri ninkii hoggaaminaya kooxda, Juan Caguaripano.
Xisbiga hanti-wadaagga ee Venezuela ayaa hadalkaasi beeniyay. Kuxigeenka madaxa xisbiga, Diosdado Cabello wuxuu ku tilmaamay “dullaan argagixiso”.
2-Halkee buu ku sugan yahay madaxweynaha dalka?
3-Dadka oo jidadka u soo baxa iyo rasaas iska dheceysa
4-Dowladaha awoodda leh ee caalamka oo u diga muwaadiniintooda
Dalka Zimbabwe, Safaaradda Britain waxay la talisay muwaadiniinta hadda ka joogo dalkaasi. “Haddii aad joogto Harare, si aysan dhibaato kuu gaarin, gurigaaga ku sugnow ama hoteelka aad deggan tahay illaa xaaladda la ogaanayo”.
Safaaradda Mareykanka ee Zimbabwe waxay Tweet-gareysay in aysan shaqeyneyn shalay oo Arbaca ahayd “ka dib xasillooni darada siyaasadeed”.
5-Warbaahinta Qaranka oo la qabsado
Balse 10-kii barqanimo, madaxweynaha ayaa idaacadda ka hadlay wuxuuna sheegay in lix qof la xiray, wuxuuna u mahadceliyay ciidamada “shaqada wanaagsan qabtay”.
6-Xudduudaha, buundooyiinka iyo garoomada diyaaradaha oo la xiro
Sida la ogyahay, casharka ugu wanaagsan ee xakameynta garoon diyaaradeed waxaa laga bartay Pakistan sanadkii 1999-kii, xilligaas oo ra’iisul wasaare Nawaz Sharif uu isku deyay in uu shaqada ka tiro taliye ciidan oo awood lahaa, Janaraal Pervez Musharraf, waxaana bilowday dagaalka kala sareynta.